Ny Dia Ny Zava-dehibe - Ny Fitsanganana amin'ny Maty sy ny Fiverenany
Avy amin'i Christopher Vogler's "Ny Dia Ny Dia: Ny rafitra Mythika"
Ao amin'ny bokiny, The Journey The Writers: Structure Mythic , dia nanoratra i Christopher Vogler fa ho an'ny tantara iray mahatsapa ho tanteraka, ny mpamaky dia mila mahatsapa fotoana iray hafa momba ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray, izay tsy mitovy amin'ny fitsapana.
Io no fara-tampon'ny tantara, ny fihaonana mampidi-doza farany amin'ny fahafatesana. Ilay mahery fo dia tsy maintsy diovina amin'ny diany alohan'ny hiverenany any amin'ny tontolo tsotra. Ny trosa ho an'ny mpanoratra dia ny haneho ny fiovan'ny fihetsik'ilay maherifo, hanehoana fa tamin'ny alalan'ny fitsanganana amin'ny maty ny mahery fo.
Ny fanalahidy ho an'ny mpianatra amin'ny literatiora dia ny miaiky izany fiovana izany.
Vogler dia manoritsoritra ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny alàlan'ny rafitrano masina, izay, hoy izy, dia mikendry ny hamorona ny fahatsapana fitsanganana amin'ny alàlan'ny fandefasana mpivavaka ao anaty efitrano maizim-be, toy ny lakandrano, alohan'ny hamoahana azy ireo ho any amin'ny faritra iray misokatra tsara, fanamoriana fanampiana mifanaraka amin'izany.
Mandritra ny fitsanganana amin'ny maty, ny fahafatesana sy ny haizina dia mbola hihaona indray mialoha ny handresena ny tsara. Ny loza matetika amin'ny ankamaroan'ny tantara manontolo dia ny loza manerana izao tontolo izao, fa tsy ny mahery fo fotsiny. Ny tsatòka no tena avo indrindra.
Ilay mpampianatra mahery fo, nampianatra i Vogler, dia mampiasa ny lesona rehetra nianarana nandritra ny dia ary niova ho zava-baovao vaovao miaraka amin'ny fahitana vaovao.
Afaka mahazo fanampiana ireo mahery fo, saingy ny mpamaky no afa-po indrindra rehefa manatanteraka ilay hetsika henjana ilay maherifo, ka mamono ny aloka amin'ny aloka.
Tena zava-dehibe tokoa izany raha zaza na tanora lehibe ilay maherifo.
Tsy maintsy mandresy amin'ny farany izy ireo amin'ny farany, indrindra raha olon-dehibe no ratsy.
Ilay maherifo dia tsy maintsy raisina hatrany amin'ny sisin'ny fahafatesana, mazava ho azy ny ady amin'ny fiainany, araka ny voalazan'i Vogler.
Ny fara-tampony anefa, dia tsy tokony hipoaka. Milaza i Vogler fa ny sasany dia toy ny fihetsika mamohehatra mahatsiravina.
Ny maherifo dia mety hamakivaky ny fiovaovana ara-tsaina izay mamorona ny fara-tampony ara-batana, arahin'ny fara tampony ara-panahy na ara-pihetseham-po rehefa miova ny fihetsiky ny mahery fo sy ny fihetseham-pony.
Manoratra izy fa ny fara-tampony dia tokony hanome fahatsapana catharsis, famotsorana ara-pihetseham-po. Ny psychicolojika, ny fanahiana na ny fahaketrahana dia alefa amin'ny alalan'ny fitaovana tsy mitongilana amin'ny tany. Ny mahery fo sy ny mpamaky no nahatratra ny hevi-dehibe indrindra, ny fahatsapana ny fahatsiarovan-tena ambony indrindra.
Ny Catharsis dia miasa tsara amin'ny alalan'ny fanehoana ara-batana ny fihetseham-po toy ny fihomehezana na ranomaso.
Ny fiovana ao amin'ilay maherifo dia tena mahafa-po rehefa mitranga izany ao anatin'ny vanim-potoan'ny fitomboana. Matetika ny mpanoratra dia mamela ny fahadisoana hamela ilay mahery fo hiova tampoka noho ny zava-nitranga iray monja, saingy tsy izany no fomba hitrangan'ny fiainana tena izy.
Ny fitsanganan 'i Dorothy dia miverina avy amin' ny fahafatesan 'ny fanantenany hiverina hody. Manazava i Glinda fa nanana hery izy hiverina hody an-tanindrazana, saingy tsy maintsy nianatra izany izy.
Miverena amin'ny Elixir
Raha vantany vao vita ny fanovàna mahery, dia miverina any amin'ny tontolo tsotra izy amin'ny elixir, harena goavambe na fahalalana vaovao hizarana. Izany dia mety ho fitiavana, fahendrena, fahalalahana, na fahalalana, Vogler nanoratra.
Tsy voatery ho loka azo tsapain-tanana izany. Raha tsy misy zavatra naverina avy amin'ny fitsapana tao anaty lava-bato tsy dia lehibe, elixir iray, ny maherifo dia voaheloka hamerina ny zava-nitranga.
Ny fitiavana dia iray amin'ireo mahery sy malaza amin'ny elixirs.
Voasakatona ny faribolana iray, mitondra fanasitranana lalina, fahatsoram-po, ary fahasambarana mankany amin'ny tontolo tsotra, hoy Vogler. Ny fiverenana amin'ny elixir dia midika fa ny maherifo dia afaka manatanteraka ny fiovana eo amin'ny fiainany andavanandro ary mampiasa ny lesona momba ny trangan-javatra hanasitranana ny ratrany.
Ny iray amin'ireo fampianarana tena tiako indrindra momba an'i Vogler dia ny tantara iray dia fitaratra, ary tsy maintsy vita tsara izy io na mety ho voafitaka. Ny fiverenana dia ny toerana hametrahan'ny mpanoratra hametraka ny andalana sy ny fanontaniana rehetra nasongadina tao amin'ilay tantara. Mety hametraka fanontaniana vaovao izy, fa ny olana tranainy rehetra dia tsy maintsy atao.
Tokony hisy sehatra telo farafahakeliny farafaharatsiny azo isafidianana, ny iray isaky ny hetsika.
Ny karazany tsirairay dia tokony hiala amin'ny karazana elixir na fianarana.
Vogler nanambara fa ny fiverenana no fotoana farany hikasika ny fihetseham-pon'ny mpamaky anao. Tsy maintsy mamita ity tantara ity izy mba hahafa-po azy na hanosika ny mpamaky araka ny nikasana azy. Ny fiverenana tsara dia manala ny kofehin-doha miaraka amin'ny fahagagana iray, fanandramana fanambarana tsy ampoizina na tampoka.
Ny fiverenana ihany koa dia toerana ho an'ny rariny poetika. Ny sazin'ny famonoana dia tokony hifandray mivantana amin'ny fahotany ary ny valisin'ny maherifo dia mifanaraka amin'ny sorona atolotra.
Dorothy dia milaza veloma ny mpiara-dia aminy ary maniry ny hody any aminy. Miverina ao amin'ny tontolo tsotra , niova ny fahitany ny olona manodidina azy. Manambara izy fa tsy hiala ao an-trano intsony. Tsy tokony horaisina ara-bakiteny izany, hoy i Vogler nanoratra. Ny trano dia tandindon'ny toetra. Nahita ny ainy i Dorothy ary lasa olona feno tanteraka, mifandray amin'ny toetrany tsara sy ny aloky azy. Ny elixir izay naveriny dia ny heviny vaovao momba ny tokantrano, ny heviny vaovao momba ny tenany.
13 Zava-maniry Mampiofana Raha Miverina any am-pianarana ianao
Fitaovana fianarana mozika - Quadrants 4 fianarana
Inona avy ny firafitry ny fanabeazana maharitra?
Manao ahoana ny fahasalamana ny fitsapam-pahaizana hetsiky ny HiSET HighSET?
Text of the 2nd Amendment of the Constitution of the United States
Lisitry ny zava-dratsy izay nitranga tany '70s
Inona ny Fitondràna: Mitifitra Baolina Golf miaraka amin'ny Fikomiana
12 Fitaovana mamolaka tsy nianatra na efa hadino
Ny maha-zava-dehibe ny politika ivelany avy any ivelany
Jeografia ao amin'ny Nosy Galapagos
Manana Joba Ianao! (ary tsy nahomby ianao)
Ireo zanakavavin'ny Mpanjaka Victoria sy ny zafikeliny
Ny Ady Lehibe II: Battle of the North Cape
'Ny Fihetseham-panoherana ny lolo'
Ireo hira folo voalohany nisioka
Miserere mei, Deus Lyrics sy Anglisy amin'ny teny anglisy
12 Fandevenana kanto indrindra ho an'i Peter Griffin
Ahoana ny fomba hanadio ny baolina baolina amin'ny fomba fanodinana
Ahoana ny fomba hanovana ny tiro-moto
Inona no tokony hatao raha toa ka tsy voavonjy ny mpianatrao
10 Zavatra azonao atao mba hanampiana ny bibidia
Mila ny Fivavahana ve ny Zanaka?
Famakiana famakiana ho an'ny mpianatra manana dyslexia
Karazam-borona ao Catalpa
Inona ny tranonkala sarotra?
Manangana ny endrika fanarenana manontolo ho an'ny sekoly
Nanao ahoana ny talenta tao amin'ny Baiboly?
Fahagagana lehibe any Kanada sary